Kungani Kungabikho Mpikiswano Enkulu? | Martech Zone
Kukhona ingane entsha ebhodini ohlangothini lokuphawula lwebhizinisi, Impikiswano Enkulu. Isisekelo senkonzo sivelele - nikeza indawo yokugcina emaphakathi ukulandelela ukuphawula kwabavakashi bakho, wandise ukuphawula okungaphezu kwebhulogi yakho, futhi unikeze isikhombimsebenzisi esicebile kakhulu ukubonisa imibono.
Okungabalulekile kodwa futhi okuyinkinga isithembiso esivela kwi-Debate Debate sokuthi ungathumela imibono yakho uma uthatha isinqumo sokuyishiya insiza. Leli yiphilisi elinzima ukugwinya… ikakhulukazi uma bevele beshiya imisebenzi yabo bese bevala isiza.
Tags: 2 ababhaliadminababhali ngeposi ngalinyeCleaningcoaitorstraffic ngqoeolsonukukhuthaza umcimbiamajramIzinhluUkwazisa ngomcimbi wokumakethaUMichael StelznerIsinciphisiababhali be-wordpress coamagama we-copressababhali abaningi be-wordpress
Jan 20, 2008 ngo-9: 21 PM
Kuluhlobo lomqondo onentshisekelo… ukukhiphela imibono yakho yebhulogi kwenye insizakalo. Izosiza ngezinkinga zogaxekile. Kungenza ngizibuze ukuthi yini enye ongayisebenzisa "ukuphuma" kubhulogi yakho (futhi ohlangothini lwe-flip, yiziphi izinhlobo zezinsizakalo zebhulogi ezintsha ezinganikezwa).
Umlando wabo we-Alexa traffic ukhombisa izipikha ezinkulu ezimbalwa. Kuzoba mnandi ukubona ukuthi insiza ingakhula yini futhi iphathe isidingo esandayo. Njengamasevisi amaningi wohlobo lwewijethi we-blog, uma ekhula ngokushesha okukhulu futhi engakwazi ukuphatha umthwalo, abangela wonke amabhulogi abo ukuthi alayishe kancane futhi abasebenzisi bangagxuma umkhumbi.
Jul 21, 2008 ngo-5: 36 PM
Sawubona Douglas. Siyabonga ngokuthumela mayelana ne-IntenseDebate. Ngingathanda ukulungisa izinkinga zakho ezimbalwa. I-IntenseDebate inikezela ngomthumeli weWordPress ebeka imibono yakho ngqo ohlelweni lokuphawula okuphathelene neWordPress.
Mayelana nokubeka imibono eyenziwe ku-IntenseDebate ngqo kumazwana akho we-WordPress njengesipele, ukubeka izinkomba, kanye ne-API yethu (ngamazwana kaNowa ngenhla), sinezici ezithile ezinkulu eziza emgqeni maduzane nje! Angikwazi ukuchithela ubhontshisi esidlangalaleni okwamanje (yize ngicabanga ukuthi ngisanda kwenza), kepha ake sithi lonke uhlu lwakho lwesifiso luzombozwa kanye netani lezinye izinto ezinhle.
Sifuna abahloli be-beta benguqulo yethu ezayo ye-WordPress plugin 2.0. Uma unentshisekelo yokuthola okwengeziwe ngezici ezinhle ezifakiwe kulokhu nokuthola uhlu lwe-beta ngicela ungithumele i-imeyili ku support@internetebate.com. Ngingathanda ukuthi usebenzise i-IntenseDebate.